Akarị Italian nri ụtụtụ na Rome | Njem zuru oke
A ahụkarị Italian nri ụtụtụ na Rome
Otu n'ime ndị kasị mma na-akpali obodo na Europe bụ Rome. Ọ na - agwakọta ntakịrị ihe niile, n'etiti akụkọ ihe mere eme, nka na gastronomy. Onye ọ bụla njem na-atọ ya ụtọ site n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ime abalị, yabụ na ị ga-eji ezigbo ụtụtụ bido ụbọchị ahụ, a ahụkarị nri ụtụtụ na Rome.
Enwere m nri ụtụtụ, ọtụtụ mgbe m na-eme njem ma ha na-anọchi anya mgbakwunye ike dị mkpa iji bido ụbọchị, ohere ịnụrụ ụtọ mpaghara, iji nwee ntakịrị akụkụ ebe ahụ m na-achọpụta. Ma gịnị ka anyị nwere ike iri nri ụtụtụ na Rome?
1 Nri ụtụtụ na rome
2 Ebee ka iri nri ụtụtụ na Rome
Nri ụtụtụ na rome
Nri niile di nkpa na Italytali, obodo nwere nri mara mma, yabụ ka anyị were ohere bido ụtụtụ rie nri ụtụtụ. O doro anya na, ndị protagonist na mgbe dịghị kọrọ bụ kọfị na na kasị nkịtị na-ewu ewu menu niile e nwere ụfọdụ achịcha dị iche iche. Mgbe ahụ, a ahụkarị na mfe nri ụtụtụ na Rome bụ kọfị na achịcha dị iche iche jiri butter ma ọ bụ jam, ụfọdụ kukiiki ma ọ bụ kuki.
Ga-ahụ menu a n'ụlọ ndị Rome ma ọ bụ na nnukwu ụlọ ahịa, mana Iri nri ụtụtụ n'èzí, n'ụlọ mmanya, bụ ụdị ahụmịhe ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị iche, mgbe ahụ, otu ụbọchị, ị ga-egwu nri ụtụtụ nkwari akụ wee pụọ wee chọọ ụtụtụ nri ụtụtụ Roman. N'ebe a, anyị na-ekwu okwu banyere kọfị na ihe dị ụtọ iso ya: bomba, ciambella, maritozzo ma ọ bụ cornetto.
Ka anyị na-amalite na kọfị. Ndị lovetali hụrụ kọfị n'anya yabụ anyị onwe anyị, yabụ maka nri ụtụtụ ọtụtụ nhọrọ ndị a na-ahụkarị bụ kọfị ojii, cappucino, kọfị na mmiri ara ehi, caffe lungo, caffe freddo, caffe al vetro ... nke ọma, enwere akwụkwọ ọkọwa okwu zuru oke ka anyị mee ka ihe dị mfe. Chọrọ:
Kọfị: ọ bụ espresso dị mfe. Ọ na-abịa na obere iko, na obere ọnụ ma na-etinye uche. Nwere ike tinye ya mmiri ara ehi ma ọ bụ shuga na ya.
Kọfị Macchiato: ọ bụ kọfị na otu ntapụ mmiri ara ehi na-ekpo ọkụ.
Cappuccino: kọfị na steamed pịa mmiri ara ehi, dị nnọọ creamy.
latte macchiato: otu iko mmiri ara ehi na-ekpo ọkụ nke nwere espresso kọfị.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Lungo: A na-eje ozi ya na iko espresso na nke ahụ bụ ihe ọ gbasara, ọ bụ espresso nwere obere mmiri ọkụ.
All ndị a nsụgharị nke Italian kọfị na-mere na ọkọlọtọ: na espresso kọfị. Ọ bụrụ na ọ masịghị gị, ị nwere ike ịtụ ahịa Americano mgbe niile na nnukwu iko, nke mmiri na-agba.
Na gbasara kọfị, ọ dị mma ugbu a, na usoro nke achịcha dị iche iche anyị nwere ọtụtụ nhọrọ. Otu bu maritozzi, a ụtọ yist bun nke bụ ọpụrụiche Rome. Akụkọ mgbe ochie nwere na na Middle Ages na March 1 e nyere maritozzo onye hụrụ ya n'anya, na ihe zoro ezo na ude ahụ ga-enwerịrị ọla ma ọ bụ mgbanaka.
Ọ bụ bun buru ibu ma dịkwa oke ọkụ ma na-ejikarị ude mmiri na-ejupụta. Dị arọ nke ukwuu? A na-esonyere ya na kọfị ma ị nwere ike ịkekọrịta ya, echiche a bụ ịnwale ya. Enwere ezigbo maritozzi na Il Maritozzaro, Roscioli Caffe ma ọ bụ Pasticceria Regoli. Nwee ọmarịcha!
Ọzọ na-ewu ewu nri ụtụtụ bun bụ ọka. N'ezie, otu ụdị nri ụtụtụ ndị Italiantali bụ naanị kọfị cappucino nwere ọka.
Nwa nwanne croissant Frances A na-ejikarị mmanụ eme achịcha ndị a na mmanụ karịa bọta, yabụ na ha nwere mmetụta dị nro, dị ụtọ. Otu ọka nwere ike ịbịa "Dị mfe" ma ọ bụ jupụta na jams, jam, ma ọ bụ ude. Enwere nhọrọ ahụike ahụike, ọ bụrụ na ha dị oke arọ maka gị, wee enwere akụkụ dị iche iche, ya bụ, jiri ntụ ọka buru ibu mejupụta mmanụ a andụ.
Ebee ka ị na-eri ogwe ọka kacha mma? You nwere ike ịnọdụ ala drinkụọ kọfị ma rie cornettos na Peeji Caffe, na Pizza del Risorgimento, ma ọ bụ na Pasticeria Barberini, na mpaghara Testaccio, ma ọ bụ n'ihu n'ihu ebe a, na Ebe ebudo tram. Ọ bụrụ na ị na-achọghị kọfị mgbe ahụ ihe kasị mma achịcha dị na Rome bụ Panificio Bonci, na Prati.
Ọ bụrụ na nri ụtụtụ ndị Roman nwere ihe dịka croissant, ma hapụ ndị France afọ ojuju, ọ nwekwara ihe dịka onyinye na-adọta ndị America. Na nke a anyị na-ekwu maka ya ciambella.
Dị ka donut, ọ bụ a ntụ ọka e ghere eghe ma nwee bat bat ya mere, mgbe ị na-atagbu ya, ọ na-akụ ntakịrị ma swiiti juputara na ọnụ gị. A na-ere ciambellas kacha mma na Linari, na Vía Nicola Zabaglia, 9.
Ọzọ ahụkarị bun nke Roman achịcha dị iche iche maka nri ụtụtụ bụ bombolone, ma ọ bụ bọmbụ, a Mkpa ọkụ na-acha e ghere eghe bun nke jupụtara na custard.
Onyinye ahụ na-aga n'ihu na ụdị buns ndị ọzọ a na-ere na ụfọdụ ụlọ ahịa na achịcha dị iche iche. Iji maa atụ, n'etiti Rom ebe dị ka Caffe Roscioli, nke dị n'agbata Ghetto ndị Juu na Campo de'Fiori. Ọ bụ ezie na ọ bụ ebe dị oke ọnụ iji rie nri ụtụtụ otu ụbọchị, ị nwere ike ịme ya ma nwee ọ ofụ na Danish ma ọ bụ nke crostata ya, achịcha dị ụtọ nke apụl na almọnd na-atọ ụtọ.
Rute ugbu a na-atọ ụtọ, ọ bụghị ya? Yabụ ọ bụrụ n'ị bụ otu n'ime ndị chọrọ ihe nnu can nwere ike soro kọfị na a tramezzini. Ha bụ triangles nke achịcha ọcha achịcha na Mayonezi dị iche iche. Ha abụghị nnukwu nsogbu. N'ezie, ha dị ezigbo mma. Ọ bụrụ na ị gaa Japan wee laghachi n'ụdị ụdị sandwiche a nwere obi ụtọ, ndị nọ na Rome ga-emechu gị ihu. Buru ya n’obi.
N’ikpeazụ ị nwere ike ikpokọta ụtọ na nnu na a ahụkarị brunch, nri ụtụtụ ma ọ bụ nri ụtụtụ. Kedu omenala ndị America gafere ụwa!
Ebee ka iri nri ụtụtụ na Rome
O doro anya, brunch abụghị gị ahụkarị Rome nri ụtụtụ mana ọ bụ omenaala ghọrọ ihe ewu ewu ma jikọtara ya na obodo ya n'ụtụtụ ụtụtụ kachasị mma. Yabụ, na mgbakwunye na saịtị ndị anyị na-akpọ aha, gosi ndị ọzọ a:
Marigold Rome, Na Via Giovanni da Empoli, 37) bụ nhọrọ mbụ. Ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nwere obere ebe a na-eme achịcha na-eme achịcha a na-eme n'ụlọ, paịlị na-apụta, yogọt organic, granola, pancakes, akwa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Tinye kọfị pụrụ iche na ndepụta ogologo na ọgaranya nke tii na ị nwere brunch zuru oke.
Caffe Merenda: Ọ bụ ebe a na-ewu ewu n'etiti ndị Rom, ndị ọkachamara na croissant na ndochi pistachio. Brioche ahụ dịkwa mma na achịcha ya niile na-apụta ìhè. Ọ bụ na Via Luigi Magrini, 6.
ginger: nọ na ebili nke nri siri ike. Ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-enyekwa nri ụtụtụ: enwere smoothies, pancakes, àkwá na ham, cornettos na kọfị. Via Borgognona, 43-46.
Nero Vaniglia: mepee n'isi ụtụtụ, pịnye 6 n'ụtụtụ. Ọ nwere ụdị ọgbara ọhụrụ nke nwere kichin niile n'ile anya. Ihe niile a na-eme n'ụlọ na nke kacha mma cute nwere mousses nke flavors dị iche iche. Ọ dị n'etiti Ostiense na Garbatella, Circonvallazione Ostiense, 201.
Akpakpa: Ọ dị nso na Piazza Navonna ma na-eje ozi dị ụtọ achịcha si n'akụkụ ụwa niile. Ọ dị na Via di Monte Giordano 60/61.
Matọ: ebe a ị ga-anwale nke kacha mma mmmmmmmmmmmmm esi Rome. Ha so na ahụkarị Puglia nri ụtụtụ ma ha nọ na nchịkọta nhọrọ nke ihe oriri a nke nwere alaka atọ na Rome. Otu dị na Piazza Bologna, nke ọzọ na Sallustiano na onye ọzọ na nkeji iri na ise nke Africa. I nwekwara ike gbalịa ịnụ ụtọ panzerotti na focaccias. Via Lorenzo il Magnífico, 26, Via Venti Settembre, 41 na Viale Eritrea, 108.
Ogwe Benaco: ebe a dị mma, dị mfe ma dịkwa ụtọ. Ọ na-ekwughachi onwe ya mgbe niile na ihe kachasị mma ọ na-eme bụ croissants. Ọ dị na Vía benaco, 13.
Caffe delle Comari: You nwere ike ịhọrọ ịnọdụ ala na mmanya ma ọ bụ na tebụl. Scdị scones dị iche iche dị ukwuu ma ndị ọrụ na-aenta ntị nke ọma. Ọ dị nso na Vatican ka ọ bụ ezigbo ebe ma ọ bụrụ na ịmalite njem njegharị gị na agbata obi emesịa. Vía Santamaura, 22. Mepee site na Mọnde ruo Sọnde site na elekere asaa nke ụtụtụ ruo elekere itoolu nke abalị.
Cafe Novecento: Ọ nwere ọmarịcha ime ụlọ tea na ọtụtụ ndị Rom iji kparịta ụka. Via del Governo Vecchio, 12.
LI.BE.RA + n'oge na-adịghị: Nke a bụ ụlọ oriri na ọ openụ earlyụ na-emepe emepe na-enye nri ụtụtụ, nri ehihie, na oge obi ụtọ. Ọ dị nso na Pizza Navona ma ọ dị ezigbo mma. Ọ dị na Via del Teatro Pace, 41.
Saint Eustachio il Caffè: ọ bụ gburugburu pantheon ma mara maka mma nke kọfị ọhụụ. Pizza di S. Eustachio, 82. site na 7:30 ụtụtụ.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime nhọrọ ịnụ ụtọ a ahụkarị Italian nri ụtụtụ na Rome, ma ha agaghị emechu gị ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » A ahụkarị Italian nri ụtụtụ na Rome
Ahụrụ m ibe a n'anya.
Ọ bụ ihie ụzọ iche na panino na ọ bụghị panini, nke ga-abụ ọtụtụ, bụ akụkụ nke nri ụtụtụ. Nri ụtụtụ Italian bụ naanị ihe ụtọ, ọ dịghị ihe nnu. A na-ere Panino n’oge ọ bụla maka ndị richaa nri ụtụtụ ruo ọtụtụ awa ma agụụ na-agụ ya dịka nri ụtụtụ ụtụtụ.
amụmụ ọnụ ọchị inye ekele dijo
N'ụlọ, nghọtahie na-adịkarị karịa n'ihi
ọgba aghara na ọ bụ ya mere IKEA ji enye Emoticons, ngwá ọrụ
nkwukọrịta iji hụ na nghọta dị n'ụlọ.
Banyere gam akporo, a na-atụ anya na mmelite n'ọdịnihu ga-eme
tinye kpọmkwem otu ihe ngosi ngosi. , France,
Germany, Italy, Na ala nke kiiboodu, ị gha enwe ike ihu igwe okwu emoji di iche
họrọ. Akara elekere dị n'akụkụ aka ekpe na-egosi gị ihe kachasị ọhụrụ
na i jirila. Ọzọkwa enwere autocorrect, 30
Akwụkwọ ọkọwa okwu nke asụsụ ndị kachasị mkpa, Na ahụigodo ekwentị m (NchNhr - Ntọala - Asụsụ na kiiboodu) naanị
mee ka ngwa m budatara na-ejikwa ya na ọ bụ ya, ọ baara m uru
Zaghachi emoticons inye ekele
Nri abalị Christmas na Cuba